लहडबाजीमा वर्णविन्यासको शिष्ट परम्परा भत्काएकाले नेपाली भाषा अराजकताको सिकार हुनपुग्यो : शरच्चन्द्र वस्ती | Ratopati
‘हिज्जेमा सर्वत्र एकरूपता कायम गर्ने भन्ने कुरा एउटा भ्रम हो’
personमोहन दाहाल exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक १६, २०७६ chat_bubble_outline2
शरच्चन्द्र वस्ती सञ्चार माध्यममा स्थापित नाम हो । प्राध्यापन, पत्रकारिता र सम्पादन क्षेत्रलाई मुख्य पेसा बनाउँदै आएका वस्तीको ‘हाम्रो भाषा’ पुस्तक निकै चर्चित छ । नेपाली पत्रकारिताका क्षेत्रमा भाषा प्रयोगमा देखिएका कठिनाइ, हिज्जेका समस्या र लेखनको स्तरीयताका बारेमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धानका साथै प्रशिक्षण दिँदै आएका उनी भाषाले स्वाभाविक गतिमा अङ्गीकार गरेको परिवर्तनलाई हामीले सहर्ष आत्मसात गर्नुपर्छ भन्छन् । जबर्जस्ती लादिएको कुरा चाहिँ पूरै गलत हो, त्यसले भाषालाई कमजोर बनाउने, अक्षम बनाउने उनको तर्क छ । भाषालाई त्यसबाट जोगाउनुपर्छ भन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपाली वर्णविन्यासका उतारचढाव, समस्या र समाधानका सम्बन्धमा शरच्चन्द्र वस्तीसँग गरिएको कुराकानी :
भइरहेको, चलिरहेको, सबैले स्वीकारेर आएको स्तरीय, मूल र शुद्ध हिज्जेलाई, जुन स्वयंमा मानक थियो, भत्काएर–बिगारेर त्यही बिगारिएको रूपलाई, अपभ्रंशलाई जबरजस्ती मानक हो भन्न थालेपछि, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर लाद्न थालेपछि समस्या भस्मासुर जस्तो भएर अगाडि आएको हो । बलपूर्वक लादिएका कुरा हटाइदिऊँ, समस्या समाप्त भइहाल्छ ।
भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन । यस्तो अधिकार एउटा वा धेरै विद्वानलाई पनि हुँदैन, कुनै संस्थालाई पनि हुँदैन । विद्वान र संस्थाहरूको सहमतिलाई पनि हुँदैन । उनीहरूसँग संसद् समेत जोडियो र सबैको सर्वसम्मति भयो भने पनि यस्तो गर्न पाइँदैन । भाषामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैहुँदैन । जसले गरे पनि त्यो अनधिकार चेष्टा हो, पूर्णतः अनधिकृत कार्य हो । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको स्वेच्छाचारी कृत्य हो ।
मूल कुरो त भइरहेका शुद्ध शब्दलाई विकृत बनाउनु हुँदैन भन्ने नै थियो । शुद्धतातिर नै जानुपर्छ, स्थापित हिज्जेतिरै जानुपर्छ, भाषालाई अस्थिरतातिर लानुहुँदैन भन्ने नै थियो । शब्दकोशमा मूल शब्दलाई मुख्य प्रविष्टि दिनुपर्छ, हिज्जे बिगारिएका शब्दलाई वैकल्पिक प्रविष्टिमा राख्नुपर्छ भन्ने नै मूल कुरो थियो । तर, विकृति घटाउनुको सट्टा बढाउँदै लगिएको थियो । मूल शब्दहरूलाई नै शब्दकोषबाट हटाउने षडयन्त्र गरिएको थियो ।
भगवानको कृपाले म विद्यार्थी छँदा यस्तो अराजकता थिएन । शुद्ध शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो । शुद्ध र मूल हिज्जे नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो । मूल हिज्जे नै प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यसमा न कसैको विवाद थियो, न विमति नै । आजको जस्तो अराजकता नभएको हुँदा नेपाली भाषा लेख्न, पढ्न, जान्न, बुझ्न कुनै समस्या थिएन । २०४० सालमा भाषालाई गिजोल्न थालिएपछि, अझ ५५–५६ साल यता त्यो विकृति उन्मादपूर्ण तवरमा चर्काउन थालिएपछि धेरै नै गन्जागोल भएको हो । मानिसलाई लाग्ला, यो सब विद्वानहरूले गरेको हो । तर यो विद्वानको काम होइन । वास्तविक विद्वानले यसो गर्दैनन् ।
नेपाली भाषाले हेक्का राखेको र हामीले पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के मात्र हो भने चाहे समस्त शब्द होऊन् वा नामयोगी, पदवियोग गर्दा अर्थमा बाधा पर्न हुँदैन । साथै, रूढ भइसकेका शब्द भत्काउन पनि हुँदैन । त्यसैले नेकशुले २०६९ ले विभक्तिवत् भएर आउने नामयोगी र विराटनगर, विश्वविद्यालय जस्ता शब्दको पदयोगलाई सम्बोधन गरेको छ ।
Nov. 4, 2019, 1:09 p.m. Shreeram Singh Basnet
Thanks for very very useful interview. I always feel proud that I amastudent of respected Osti sir. He was the real teacher who made my Nepali writing more correct duringatraining in 2042.
Nov. 2, 2019, 2:41 p.m. गोपाल गिरी
अत्यन्त ज्ञानवर्धक लेख रहेछ । सबैले एकचोटी पढनै पर्ने ।